Mpana tantara, boky izay mamorona tantara | Vaovao IPhone
Ny fampifangaroana ireo singa fialamboly mahazatra indrindra toy ny boky sy ny haitao vaovao dia manokatra tontolo vaovao feno fahafaha-manao, indrindra ho an'ireo ankizy kely ao an-trano izay afaka miala voly rehefa mampivelatra ny eritreriny ary tia mamaky. Storyrider dia iray amin'ireo fampiharana izay mampifangaro tsara ireo singa ireo amin'ny alàlan'ny fampiharana ny bokin'ny ankizy sy ny tanora ny mpamaky no manapa-kevitra ny amin'ny làlana alehany, fanapahan-kevitra izay hisy vokany amin'ilay tantara vakinao.
Amin'ny famolavolana tsotra sy tena intuitive, ny mpamaky dia afaka misafidy sanganasa boky telo samy hafa feno traikefa nahafinaritra, misy sary be dia be ary miaraka amina feon-kira tany am-boalohany izay hiaraka aminao amin'ny dia niainanao. Toy ny amin'ny lalao mahazatra, rehefa manatanteraka iraka ianao dia mivoatra ny toetranao ary mahazo laza sy laza ambony ianao, fanentanana hanohy ilay traikefa nahafinaritra. Azonao atao koa ny mamaky ny boky raha vantany vao vita satria raha tsy mitovy ny fanapaha-kevitrao dia ho vaovao tanteraka ilay traikefa nahafinaritra. Ny fampiharana aza mamela mamorona kaonty samihafa mba hahafahan'ny olona maromaro mankafy azy tsy miankina, mazava ho azy fa mividy ilay boky indray mandeha ihany.
Ny mpamorona ny Storyrider dia orinasa tanora sy espaniola izay, mahatadidy ireo boky mahatalanjona avy amin'ny andiany "Safidio ny fiainanao manokana", dia nanapa-kevitra ny hamorona ity fampiharana tena tsara ity. Zava-dehibe ny manamarika izany misy amin'ny Espaniôla sy Anglisy ireo boky ireo, afaka mifamadika amin'ny fiteny roa amin'ny fotoana rehetra. Maimaimpoana tanteraka ny fampiharana ary koa ny boky voalohany amin'ny andiany telo dia misy maimaim-poana koa, ary ny tsirairay amin'ireo boky telo ambiny (iray isaky ny andiany) dia mitentina € 3,99 ihany. Natao ho an'ny mpamaky 7 taona no ho miakatra, tsy misy isalasalana fa safidy tsara indrindra hampahafantarana ny ankizy amin'ny tontolon'ny famakiana mahaliana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Storyrider, boky izay mamorona tantara ny fanapaha-kevitrao
Salama, tsy mahita "mpitantara tantara" ao amin'ny App Store aho .. ..
Manana ny rohy ianao amin'ny faran'ny lahatsoratra
Tianao ve ny Minecraft ho an'ny iOS? Ny vaovao farany anao dia feno vaovao